Wasiirka Maaliyadda XFS oo dhagax dhigay dhismaha xarunta ilaalada canshuuraha ee Turabataariyo – Walaal24 Newss
March 11, 2019	0	By walaal24
Wasiirka maalayadda Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhagax dhigay Xaruunta horumarinta aaladaha lagu qaado canshuuraha dalka, Ka hor dhigax dhigista wasiirka ayaa xog waraystay injineerada dhisaya xarumahani.
Wasiirka Maaliyadda ayaa ugu horeyn dhagax dhigay dhismaha xarunta ciidanka ilaalada canshuuraha ee loo yaqaan turubataariyada waxaana uu sheegay inay saldhig u tahay hagaajinta hannaanka canshuur qaadista.
“ Waxaan ku faraxsanahay inaan dhagax dhignay xaruntii canshuur ilaaliyeyaasha ama ama turabataariyo ciidanka ee canshuurta ka shaqeeyo,waxay sal u yihiin uruurinta canshuuraha iyadoo la raacayo sharciga dalka u dhigan,” ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda XFS.
Taliyaha Hogaanka Canshuuraha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Janaraal Cabdulaahi xasan Bariise oo uga Mahad celiyay dadaaalka Wasaaradda Maaliyadda dhismaha xaruntan ayaa ka hadlay muhiimadeeda.
“ Waa sharaf iyo karaamo, waana meeshan dhexe ilaalinta canshuuraha,waa halka ciidanka ilaalada canshuuraha, sidan marar badanba idin kugu sheegay wuxuu si toos ah ula shaqeeyaa Wasaaradda Maaliyadda,dakhliga uruurintiisa iyo xafidida goobtii la geeyo,ciidankii u tababarnaa oo aqoonta u lahaa waaye,” ayuu yiri Generaal Bariise.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sidookale kale dhagax dhigay dhismaha machadka dhaqaalaha dalka iyo 5 xarumood kale oo loogu talagalay canshuuraha, waxaana uu tilmaamay dhismaha shirkadaha maxaliga ay u tartameen kuna guuleysteen shirkadaha ka shaqeyanaya oo la filayo inay dhismaha dhammeystiraan bisha Luulyo ee sanadkaan.
Dhismaha xarumahani oo loogu talagalay canshuur qaadista ayaa ku soo beegmaya xili Soomaaliya ay sameynayso kobac dhaqaale oo xooggan daqliga dowladda soo gala oo ay masuul ka tahay wasaaradda Maaliayadana uu kordhay sanadkii tagay 31%.
Taliska Ciidamada Deegaanka ee Gobolka Shabeelada Hoose oo soo bandhigey Ciidamo hor leh
Ciidamada Xooga Dalka iyo Al shabaab oo dagaal ku dhaxmaray Degmada Awdheegle
Ra’iisal wasaare Xasan Cali Khayre iyo Wafdi uu hogaaminayo oo u amba baxay Dalka Mareykanka
Mashruuca daaweynta xoolaha oo magaalada Muqdisho laga Daah-furay
Dhageyso+Sawiro: Saraakiisha ciidamada xoogga dalka oo ka guddoomay Darees ciidamada oo dowladda Turkigu
Dhageyso: Gudomiyaha Aqalka sare “Soomaliya nabad bey rabtaa Midnimey rabtaa wada hadal bey rabtaa heshiis bey rabtaa…